Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada » Aroos qaali ah iyo Furiin is xiga Mareykanka ugu imoow! Maxay tahay Sababtu?
Guurku waa wax wanaagsan oo qofka dhaxalsiiya nolol iyo barwaaqo is xig xigta waana midaasi sababta Nabiigeena suuban NNKH uu ugu baaqay dhalinyarada kuwooda kari kara in ay guursadaan , waxaa sidoo kale baaqaasi uu muujinayaa in guurku yahay meesha looga fogaado xaaraanta laguna jabiyo dareenka qofka.
Soomaalidu waxay kamid yihiin muslimiinta ka jawaabay baaqaasi Nabiga NNKH is guursada iyagoon shuruudo sida buuraha oo kale ah aan isku xirin sida ay sameeyaan qaarkamid ah wadamadda Carabta oo raga intooda badan aysan awoodin in ay guursadaan sababtuna ay tahay aduunyo aad u badan oo laga rabo ninka.
Baaritaano uu webiste-ka kobciyemedia.com sameeyay mudo badan ayuu ku ogaaday in wadamadda Mareynkanka Iyo Kanada ay kamid yihiin meelaha ugu adag ee laguguursado inagoo sabatana ogaanay balse waxaan ku hormaridoonaa dalka mareynkanka sida ciwaankeenuba yahay.
Soomaalida kunool dalka Mareyknaka waxay u badanyihiin dhalinyaro rag iyo dumar leh oo misna kali nool ah waxaana ugu wacan guurka oo ah wax aad ugu adag dhalinyaradaasi sida ay noosheegeen qaarkamid ahdhalinyarada joogta dalkaasi waxaa dumarka ay ragu kuxujeeyaan in ay wax kasta heysato sida ,Guri, Gaari iyo hanti ay mudo iskudabarto taasoo markii hablaha qaarkood ay kasoobaxaana misna loogu siidaro furiin niyad jabis ah.
Mareykanka waa meesha inta lagu sameeyo aroos aad u heersareeya misna todobaad kadib aad maqleyso in labaddii qof ee is aroosay ay misna kala tageen inkastoo ay sababuhu badanyihiin hadana waxaan soo qaadanay midkamid ah qisooyinkii dhacay ee nalooga sheekeyay waxayna ahayd sidaan.
Gabadh mudo badan baadi goobaysay wiil ay nolosha lawadaagto ayaa heshay wiil aay mudo yar isyaqaaneen kadibna waxay u bandhigtay fikirka ah in ay iskguursadaan balse waxaa layaab kunoqotay jawaabtii ay wiilka ka heshay oo ahayd in ay heysato waxkasta kadibna gabadhii oo intaasba heystay ayaa si fudud ku yiri waxba kama rabo sidaas ayaa aroos heersare ah loogu tumay labaddii lamaane GURIGIINA GUURI NAGAY GUULOOW KAYEEL ayaa loogu duceeyay balse Mudo todobaadyo gudihood ah ayeey arintii isku badashay GURIIGIINA GURI DUMAY… Maxaa dhacay? Khilaafku wuxuu ka bilawday cidda bixineysa Allaabtii guriga Lagu sharaxay oo Waxa looyaqaano “Payment” Ama iga yar yareyso lagusooqaaday kadib markii wiilkii isla soo taagay in uusan waxba kabixineynin.
Sheekadaan iyo kuwo kale oo dhaqaale u badan ayaa ugu wacan khilaadka dumiya Aqaladda cusub iyo kuwa sanado jirsadayba ee dalka mareynkanka, sidoo kale waxaa lamaanayaasha qaar isku fahmiwaayaan markii ninku diido in lagu qoro in uu yahay ninka reerka isagoo ka cararaya in dhaqaale loo raacdo ama dowladu la xisaabtanto.
Hadda taasi waxay keentay in ragii iyo dumarkii ay u guurdoontaan Afrika halkaasoo qofkastaaba aaminsanyahay in ay kahelayaan qof sidey rabaan u yeela oo aan la xisaabtamin taasoo runtii ah isfah fiican oo reer kudhismi karo .. Noloshu waxay kufiicantahay marka la isfahmo qofkastaana looga danbeeyo shaqadiisa…
FILO GOOR DHOW …MAGAALO KAMID AH KANADA OO RAGA IYO DUMARKA JOOGAA AY KHAATI KATAAGANYIHIIN DOOBNIMO ……